Ahoana No Tsy Hanoratana Momba Ny Smartphones Sy Espaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2015 2:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, русский, Ελληνικά, English
Rehefa nanao fanamarinana ny zavatra tena nisy mikasika tantara iray teto amin'ny Global Voices indray andro izay aho, dia nahita ny mombamomba manokana ireo voaiben'ny resaka media sy ny loharanony manokana mampitsiriritra, Arianna Huffington. Rehefa nitetitety ny fàhana an'ny tonian'ny famoahana ao amin'ny Huffington Post aho, bitsika vao haingana momba an'i Espaina, toerana izay nananganako toeram-pivarotana, taona vitsy lasa izay, no nahasarika ny masoko. “Maninona no tsy misy olona miresaka momba ny fiankinan-doha amin'ny smartphone ao Espaina—fa aleon-dry zareo miresaka izy samy izy,” hoy ilay izy nanambara tamin'angolangola.
Tsy dia matetika miresaka ao amin'ny aterineto aho, saingy nisy O RLY? iray tsy nampino nipotsaka teo imolotro. Ilay bitsika dia nifandrohy taminà tsanganan-dahatsoratra iray tao anatin'ny gazetiboky Pacific Standard, izay miresaka ireo olana sosialy, teokarena ary politika ao Etazonia, izay manamafy fa “ny fahasamihafàna goavana indrindra” eo amin'ny fomba fampiasàn'ny Amerikana ny sy Espaniôla ny teknolojia dia “toy ny hoe tsy eo ampototry ny findainy ny tsirairay” ao Espaina. “Ny ataon'ireo olona ao an-toerana ho solon'izany dia ny mifampiresaka izy samy izy, amin'ny feo mafy sy henjankenjana tsara, tsy mitsahatra,” hoy ilay mpanoratra izay mipetraka any Brooklyn. Nifototra tamin'ny fivahinianany tao Espaina sy Portiogaly ny fandinihana nataony. “Zavatra nanaitra ahy satria karazan-javatra mampitombo ny fifandraisana sosialy no niriantsika rehefa isika ilay maneho alahelo momba ny fiankinan-dohantsika amin'ny smartphone iny.’”
Saiky mivaky toy ny boky katsikana avy aminà iraka Tandrefana, nalatsaka tamin'ny elonaina ho ao amin'ny toerana iray “mafàna” ao an-tanàna, ilay ampahan-dahatsoratra ary mandefa tatitra miverina manao safo be mantsina momba ilay toerana. Milazalaza an'i Espaina ilay izy—fantatry ny maro loatra ho tanin'ny siesta rehefa mitatao vovonana, na dia efa 16% monja amin'ny mponina ao aza sisa no maka fiatoana kely isan'andro hanaovana izany—ary Eoropa lehibe kokoa tahaka ny karazany sasany amin'ireo olondia manana ny hajany ao anatin'ny taonjato faha-21, mifandrindra amin'ny tontolon'ny kanto voajanaharin'ny fifampiresahana sy tsy voaloton'ny teknolojia tahaka izany izay namadika ny Amerikana ho toy ny faty mitsangana miaraka amin'ny masobe mivontirika mitete ranomaso.
I Espaina no voalaza fa manana ny taha ambony indrindra amin'ny tanora miankin-doha amin'ny smartphones ao Eoropa. Mivoaka amin'izany fa antsasa-manila mahery amin'ireo Espaniôla no manan-tahotra kidaladala tsy mety hivoaka ny trano raha tsy miaraka amin'ny findainy. Ho an'ireo olona eo anelanelan'ny 18 sy 24 taona, miakatra ho 75% ny tarehimarika. Araka ny fanadihadiana iray, 40% amin'ny olona eo anelanelan'ny 18 sy 30 taona ao Espaina no miteny fa tsy afa-miaina lavitry ny smartphone-ny.
Ireo Espaniôla, izay mitana laharana faha-efatra erantany raha resaka fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny sehatra WhatsApp, dia mifandray amin'ny alàlan'ny karazam-pitaovana manana salanisa 2.9 eo ho eo, iray amin'ny taha ambony indrindra eran'izao tontoolo izao. Tamin'ny taona lasa, namorona rindrambaiko fampiasa antsoina hoe FaceUp ny Espaniôla roa, natao indrindra hisorohana ny fiankinan-doha amin'ny smartphone. Tamin'ny volana lasa, namoha ny varavarany tao Madrid ny “Smartphones”, tantara nosoratan'ny Espaniôla iray monina any Etazonia, momba ireo fomba nampiasain'ny tompon'ilay teknolojia nanovàna ny fifandraisan'ny olona.